भारतबाट आउने महिलालाई तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ: डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले भारतबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग शुक्रबार कुरा गर्दै डा.कोइरालाले बिहे गरेर आउनेवित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले विदेशी महिलालाई नागरिकता दिँदैमा नेपाललाई फिजी बनाउन नसकिने बताए । ‘विदेशी महिलाले विवाह गरेर आइसकेपछि आफ्नो नागरिकता बुझाइसकेको छ भने विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन केको आपत्ति र ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने अरु (भारत)को हामीले किन फलो गर्ने ? हाम्रो आफ्नै हुनु पर्यो नि ।
‘न्यायाधीश बन्न नदिने, प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, राष्ट्रपति बन्न नदिने यो ठीक हो’, महामन्त्री डा.कोइरालाले भने, ‘किन सात वर्ष लगाउने ? किन पर्खिने ? अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको विमती छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि राखिएको नागरिकताको व्यवस्था ठीक छ’, उनले भने, ‘नागरिकता दिएर नेपाल फिजी बन्दैन ।
विवाह गरेर ल्याइसकेपछि नागरिकता दिनुपर्छ । विदेशी महिलालाई विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने भनेर आवाज उठेका बेला कांग्रेसका महामन्त्री डा.कोइरालाले विदेशी महिलाहरूलाई विवाह गरेर आउनेवित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिएका हुन् ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिएको भनेर आवाज उठेको छ । त्यस बेला विवाह गरेर आउनेवित्तिकै भारतीय महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान समेत राखिएको छ । श्रोत:- मिडिया डबली बाट
Prevभावुक हुँदै सुशान्तका पिताले भन ३ वर्षको भाकलपछि जन्मिएको छोरो
Nextलकडाउनमा नेपाल आउनेको संख्या भन्दा बाहिरिने को संख्या बढी